Izindawo zase-Estonia Eziku-inthanethi | Amakhodi E-inthanethi e-Casino
(234 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ...Ngaphandle kokuthi eminyakeni yamuva nje ukugembula kwase-Estonia kudlule ezikhathini eziningi ezinzima - kuyinkinga yomhlaba jikelele kwezezimali nokuqiniswa kwemithetho evela kuhulumeni, nezinye izikhathi ezingezinhle - uyaqhubeka nokusebenza kahle hhayi kuphela, kepha nokuthuthuka .
Vele, zonke lezi zinto, okungukuthi, zaba nomthelela "ekuhlanzweni" okuthile kwabasebenza ukugembula. Abanikazi bamakhasino amancane kwakudingeka bawavale ngenxa yokungazuzi, kepha izindlu ezinkulu zokugembula, kunalokho, zandisa imali yazo. Kufake isandla kulokhu nasekuvulweni kwekhasino eku-inthanethi.
Impumelelo enkulu yabantu base-Estonia ithokozela i-roulette, kepha hhayi kude nayo kuphelile ngemishini ye-poker neye-slot. Mhlawumbe lapha kuzoba ukwenza i-lottery yombuso no-Eesti Loto. Ngemuva kwakho konke, ngokusho kwezibalo, idlalelwa cishe izakhamizi ezingama-80% zase-Estonia.
Nakuba iBaltic izisho futhi zithanda ukugembula ukuzijabulisa, kodwa iningi lemali engenayo ye-casino e-Estonia lithola kubavakashi . Ngaphandle komncintiswano phakathi kwabo iFinland, ngenxa yokusondela ngokwendawo kwamazwe womabili. Muva nje, kunenkambiso ekhombisa ukuthi amakhasino endawo ajwayele ukuvakasha angamaRussia, inani lawo maduze elizolingana neFinnns.
Ngokusho koMnyango Wezokuvakasha wase-Estonia unyaka kuya esilinganisweni uvakashelwa ngabantu ababalelwa ku-800,000 eFinland, ngasikhathi sinye bachithe ubusuku obuyizigidi eziyi-1.6 lapha. Endaweni yesibili impela amaRussia asemuva kweFinns aphindwe kane. Kuyafaneleka ukusho ukuthi lezi zibalo azibandakanyi labo abahlale nabangane noma izihlobo, beza e-Estonia usuku olulodwa nje noma beza lapha ngezinqola zokuhamba ngomkhumbi.
Ngokuya ngeminyaka yabantu baseRussia abangaphansi kwabaseFinland nabaseSweden. Ngokuphikisana nabavakashi baseScandinavia, iRussia imosha kakhulu. Bajwayele ukukhetha hhayi amahhotela abizayo kuphela, kepha futhi nalawo lapho kukhona ikhasino ngempela. Futhi imali bayishiya ngemuva kakhulu kunabomakhelwane babo abasenyakatho ngethemba lokuwina umklomelo omkhulu.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Estonian Online ze-Casino
Ukuthuthukiswa kwebhizinisi lokugembula e-Estonia
Amakhasino okuqala avele ezweni kungekudala ngemuva kokuphela kweSoviet Union kanye nama-republic ayo angaphambilini athola inkululeko. Ijubane lokuthuthuka kwebhizinisi lokugembula e-Estonia liyamangalisa nje. Ikakhulukazi ngemuva kokuthi izwe libe yilungu le-EU. Manje iziphathimandla zethule izichibiyelo eziqinile emithethweni elawula ibhizinisi lokugembula, kepha, ngokumangazayo, ziya kuye kuphela.
Kunzima ukukholelwa, kepha eminyakeni emine eyedlule, i-Estonia yayinokugembula okuhlukile okungama-200 (amakhasino, amahholo womshini wokugembula, njll.). Babenayo yonke le ngcebo yabantu abangu-19, phakathi kwabo okwakukhona umncintiswano obucayi. Isimo sokutshala esikhangayo sigcine sidale isimo lapho abadlali bengamane baphuthelwe yibo bonke amakhasino. Esigabeni esifanayo somthetho akubandakanyi noma yiziphi izinyathelo zokuvimbela. Noma ngubani ofuna ukuvula indawo yokugembula angakwenza e-Estonia ngaphandle kwezinkinga. Lapho izichibiyelo ezidingekayo sezamukelwe emakethe bekungabadlali abakhulu kuphela nabancintisana nabo abancane abaphoqeleke ukuba bahambe.
Sithanda ukuphawula ukuthi ngobuhlakani iziphathimandla zase-Estonia zathumela kanjani inzuzo yazo zonke izakhamuzi zayo ezincike kakhulu ekuzijabuliseni kokugembula. Wonke amakhasino akhokha inani lentela eliphakeme ngokuqhathaniswa, kanti ingxenye enkulu yemali ebhekiswe ekuthuthukiseni isiko (46%). Okusele kusatshalaliswa phakathi kweRed Cross nokuxhaswa ngezimali kwezinhlelo ezikuvumela ukuthi unikeze usizo kulabo abaswele, kubandakanya nezingane.
Lawa mathuluzi afanayo ahlela amaphrojekthi nemicimbi eminingi yamasiko: izincwadi ezitholakalayo, imikhosi, zisuse ifilimu nokunye okuningi. Ngaphandle kokuthi e-Estonia nakulezi zindawo zixhaswe kusabelomali sikahulumeni, kuvame ukusetshenziswa imali etholwe ngokukhishwa kwentela yokugembula. Ngamanye amagama, abadlali abashiya imali ekhasino, futhi baxhase iningi lamaphrojekthi nemisebenzi yamasiko, nezimali ezengeziwe ezivela kumgcinimafa ezinye izinto ezibalulekile okufanele zenziwe.
Imithetho yokugembula yase-Estonia
Ngenkathi kudlalwa ekhasino lase-Estonia kungakhona noma iyiphi indoda, kunezidingo ezithile zokuvakashelwa kwayo. Ngakho-ke, uma uthatha isinqumo sokuyokwanelisa umuzwa wenjabulo, ungakhohlwa ukuletha ipasipoti yakho noma enye imibhalo evumela ukukukhomba. Ngesikhathi sokuvakasha kwakhe kusikhungo sokugembula kufanele okungenani ube neminyaka engama-21. Ekungeneni kwanoma yiziphi izivakashi zekhasino kudlula ukubhaliswa okulula.
Ngokumangazayo, lapho imikhawulo yobudala ngisho nezingane zisengakwazi ukujoyina ukugembula futhi zichithe isikhathi ngezibhamu zemishini emikhunjini noma kumgibeli. Kukhawulelwe ezinganeni nokubheja okuphezulu, okungama-euro ayi-10.
Kunezidingo ezithile nokubekwa kwezikhungo zokugembula. Zingatholakala esakhiweni esihlukile, futhi kube yingxenye yesakhiwo sehhotela, indawo yokuzijabulisa noma yezitolo. Okudingekayo ukukhishwa okuhlukile.
Kusukela ngonyaka ka-2012, izindawo zokugembula zavunyelwa ukuba zikhuphule inani lemishini emahholo okugembula libe yizicucu ezingama-40. Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka ukukhulisa uhla lokuzijabulisa kolunye - ukushaywa okunzima ekhasino elincane, eligcine lisondelene, lingakwazi ukumelana nomncintiswano. Eminyakeni yamuva, inani lamakhasino lacishe laba uhhafu, kepha lokhu akuzange kube nomthelela ezivakashi.
Kukho konke lokhu kukhona nama-plus. Ukunciphisa inani lamakhasino kudonse ukwehla kwesibalo esihlushwa ukugembula. Uhlu lwabantu oluthunyelwe kubanikazi bomnyango wentela yekhasino namasiko. Okuthakazelisa kakhulu ukuthi akekho umuntu okuphoqe ukuthi ungene kuyo ngeke afake - kungokuzithandela okukhulu futhi kuncike ekuzimiseleni komdlali. Ukusebenza nohlu lwamabhange, ukunyakaza kokulandela umkhondo wezezimali kuma-akhawunti wabadlali abagembayo ngokweqile nokungabavumeli kwabangabolekisa.
Ukudlala kuphi e-Estonia
E-Estonia uzothola ezihlukahlukene kakhulu zekhasino . Futhi lokhu akusebenzi enhlokodolobha kuphela. Amakhasino avakashelwa kakhulu nakakhulu kunabo bonke, ngaphezu kweTallinn, Narva, Tartu, Pärnu noJõhvi.
I-Estonia - lokhu kuyindawo enhle ehambelana ngokuphelele nabalandeli bokuphumula okuthulile nemvelo enhle. I-Tallinn yasendulo, edume ngama-spas ayo iPärnu neSaaremaa - lezi zindawo, kanye nezinye eziningi ziheha izivakashi ezivela emhlabeni wonke ziye ezilinganisweni zayo ngokuhamba kwesikhathi, izikhumbuzo zezakhiwo kanye nokuzijabulisa. Kungenzeka yini ukuthi e-Estonia uye ekhasino noma udlale amakhasino aku-inthanethi? Asibone!
Imithetho yase-Estonia ngokugembula - imininingwane yomlando kusuka ku-1990 kuya ku-2017;
Ama-opharetha womhlaba angekho emthethweni aqapha futhi avinjelwe;
Kukhona uhlu lwamasayithi avunyelwe futhi avinjelwe (izixhumanisi kubo zikulesi sihloko);
Ukulawula okuqinile phezu kwezivakashi ze-casino e-intanethi;
Ukungena kwi-casino esekelwe emhlabeni kuyiminyaka eyi-21.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokugembula kuleli zwe kanye nekhasino elikhulu kunazo zonke elithi "Reval Park" funda isihloko sethu.
Imithetho yase-Estonia ngokugembula - isizinda esingokomlando
I-Estonia yathola ukuzimela ngaphandle kweSoviet Union ngo-1991, kepha kusukela ngasekupheleni kweminyaka yama-80s yekhulu lama-XX ezweni laqala ukuthuthukisa umkhakha wezemidlalo. Okuvelele kwalokhu kuthuthukiswa, nemithetho yezomthetho, siyethula ngendlela yetafula.
1989 Umkhumbi "uGeorg Ots" waba yihholo lokuqala lokudlala, lapho babedlalela khona imali. Ikhasino lokuqala ehhotela "Isigodlo" saseTallinn.
1990-1994 Ukuvula amakhasino anjalo wenethiwekhi njenge-Olympic Casino, iKristiine Casino, i-Play-In Casino Group. Umbuso ukhipha amalayisense.
1995 Umthetho N 580 "Ekugembuleni". Isebenza kanjalo ngezinguquko nezichibiyelo eziningi. Ilungelo lokuhlela kuHulumeni, elinganikeza izinkampani ezizimele amalayisense. Qiniseka ukuthi uthola ilayisense yemisebenzi yokugembula (njengemisebenzi ehlukahlukene - yeminyaka eyi-10) nemvume yokuhlela imidlalo yenhlanhla (ilungelo lokuvula indawo yokugembula kwenye indawo ethile - iminyaka engu-5).
1997 Ukukhangisa ngokugembula kepha ukukhangisa kuzikhungo zokugembula. Ukuvulwa kweNhlangano yabaqhubi bemidlalo yokugembula i-Estonia.
2008 Ukuqiniswa komthetho "On Ukugembula" - njalo ikhadi likamazisi, zonke izivakashi zilungisiwe, umdlali, ngesicelo sakhe sokuvimbela ikhasino myeke (ekuvikelweni kwabagembuli). Ukuzikhawulela ngokugembula kwabase-Estonia kungasetha iBhodi Yentela Namasiko.
2009 Ukugunyazwa kwekhasino eku-inthanethi - ukunikezwa amalayisense kwabasebenza ngokusemthethweni nokuvimba okungekho emthethweni. Amakhasino aku-inthanethi kufanele atholakale kubantu abadala kuphela, kanye nokuhlonza ubunikazi nendawo yokuhlala kwalowo mdlali. Abasebenza kwamanye amazwe ukwenza imisebenzi yabo ibe semthethweni bangahle bangene esivumelwaneni nabahlinzeki bendawo, nabo abasebenza ngendlela esemthethweni endaweni yase-Estonia. Zonke ezinye izingosi ezingekho emthethweni zakwamanye amazwe zivinjelwe opharetha benethiwekhi, okwamanje uhlu lokuvinjelwe kwabahlinzeki bamazwe angaphandle base-Estonia seludlulile lwaba yi-1000.
Amakhasino aku-inthanethi - ukuthi empeleni le mithetho isho umdlali?
E-Estonia, maqondana nokugembula kusetshenziswa lokho okubizwa ngokuthi uhlelo lokuqapha olulawulwayo - okungukuthi, ukugembula akuvunyelwe, kepha kungaphansi kuka-100% olawulwa umbuso. Lokhu kusebenza kokungaxhunyiwe ku-inthanethi njengamakhasino asemhlabeni kanye namakhasino aku-inthanethi kwi-Intanethi.
I-Casino e-Estonia e-Estonia kufanele ilayisensi kuleli zwe, bese uyidlala ngokugcwele.
Amakhasino angaphandle ngaphandle kwelayisense e-Estonia, amathrekhi namabhulokhi. Uma ikhasino ingafakwanga "ohlwini lwabamnyama", lapho-ke ingaya lapho nganoma yisiphi isikhathi bese inzuzo ekhishwayo ingaba yinkinga.
Umdlali kufanele abe seminyakeni esemthethweni. Imininingwane yayo igcinwa ku-database ekhethekile yabadlali.
I-akhawunti elandelwe nokuwina - imali ingadluliselwa kuphela kwi-akhawunti lapho kufakwe khona idiphozi (lokhu kwenziwa ngokumelene neqiniso lokuthi "imali ehlanjululwe") yenziwa.
Amakhasino asekelwe kumhlaba angaphumelelwanga
Amakhasinisi alayisensi atholakalayo ekuvakasheni umuntu omdala (ikhadi lokuzikhethela eliphoqelekile).
Ngoba kuncike kumdlalo kunethuba lokwenqatshwa ngesisekelo sezitatimende zomuntu siqu kwiBhodi leRhafu neyeMpahla, khona-ke ikhasino ayinalo ilungelo lokuvumela umdlali.
Ukuze ikhasino esemthethweni kunezidingo ezicacile futhi eziqinile, ngakho-ke inkonzo abayenzile ezingeni eliphezulu laseYurophu, elihlanganisa kakhulu abadlali.
TIziphakamiso ze-hese zingadinga izimo ze-dopolnitenyh
I-Tallinn, e-Estonia: idolobha lemibhoshongo namakhasino
I-Kolyvan, I-Rewal, i-Revel - okuthiwa iTallinn ngaphambili. Idolobha okungenani iminyaka engu-900. Igama lenhlokodolobha lingasho "Inqaba yaseDenmark", "idolobha lasebusika" noma umane “Khiya”.
I-Tallinn - itheku elidumile laseYurophu kanye nomlando wezamasiko womhlaba - ikakhulukazi ngenxa ye- idolobha elidala . Kule ngxenye yedolobha kulondolozwe izakhiwo eziningi i-XI - XV century, kufaka phakathi inani elikhulu lemibhoshongo.
Umlando wezwe uhlobene kakhulu nomlando waseRussia. Hhayi kanye lapho i-Estonia yayiyingxenye ye-USSR, kepha ilwela njalo ukuzimela. Ngo-1991, izwe lathola inkululeko.
I-Tallinn - ngezindinganiso zamadolobha amakhulu, idolobha lincane kakhulu, kunezakhamizi ezingama-430,000 kuphela. Kodwa-ke, imayelana ne-40 "casino". Amakhasino ase-Estonia yinoma yikuphi ukusungulwa kwezokugembula - iklabhu elincane elinemishini yama-slot, igumbi elincane ehhotela elinamatafula ambalwa wokudlala futhi, nakanjani, izindlu ezinkulu zokugembula ezisezingeni eliphakeme.
Enhloko-dolobha yase-Estonia, kuhlala kubavakashi abaningi - imvamisa abaseFinland nabaseSweden bavela eFinland naseSweden. Kungakho abasebenzi bekhasino bejwayele izivakashi futhi bekwazi ukuzisebenzela.
Ikhasino enkulu yedolobha - iReval Ipaki ngaleso sikhathi . Lokhu kuyinto yakudala (ngomqondo omuhle wegama) lesikhungo esinehhotela elihle namahholo emidlalo amahle.
In iReval Ipaki ngaleso sikhathi cishe izikhala eziyikhulu, kune-roulette, i-baccarat, i-blackjack negumbi le-poker. Ngendlela, e-Estonia kwenziwa imiqhudelwano eminingi ye-poker yamazwe omhlaba, ukuze izivakashi nezakhamizi zedolobha bajwayele lolu hlobo lwemisebenzi.
I-casino enkulu kunayo yonke idolobha yama-Olympic Ezokuzijabulisa Iqembu liyi , futhi enezindawo zokwenziwa kwamanye amazwe aseBaltic nasePoland, eSlovakia naseBelarus.
Ukungena ekhasino kuvunyelwe kubantu abangaphezu kweminyaka engama-21, ikhodi yokugqoka ayivumelekile - ngaphandle kwe "sportivkah" ngeke ivunyelwe.
Estonia ebalazweni laseYurophu
I-1. Idolobha elidala: indawo lapho kufanele uye khona kuqala. Izimpande zomlando wale ngxenye yedolobha ziya ngekhulu le-13. Uma uzithola komunye umhlaba: itshe laphakade ngaphansi kwezinyawo, imigwaqo ethokomele emincane, izakhiwo eziyiqiniso, ezigcinwe ebuhleni bayo bokuqala.
At i-Square Hall Square ziningi izindawo zokudlela ezinhle, izindawo zokudlela kanye nazo zonke izinhlobo zezitolo ezithokozisayo, ama-boutique. Umbono omuhle wokuhamba uye esiqongweni seDolobha Elidala, Vyshgorod , ehlinzeka ngombono ohlukile wedolobha nolwandle.
I-2. Kick-in-de-Kök: omunye wemibhoshongo edume kakhulu yedolobha elidala, elizungezwe - izaba nge-tautology - udonga olujiyile. Igama lalo lihumusha ngokuthi ” Bheka ekhishini ” - ngoba bekusobala impela ukuthi kulungiselela abantu ezindlini eziseduze.
Kiek in de Kok cishe amamitha angama-40 ukuphakama, ubukhulu bezindonga - amamitha amane.
Uma ukhathala ngokubonga lesi giant ngaphakathi nangaphandle, ungahamba uhambo olumangalisayo ngokusebenzisa imigudu ehambayo edonsa edongeni lomuzi.
I-3. I-Kadriorg: ifa elaziwa kakhulu loMbuso WaseRussia - isigodlo sikaPeter I. Ukwakhiwa kwaqala ngonyaka we-1718, manje osungumnyuziyamu osesakhiweni.
Kadriorgtakzhe ubize Ekaterinentalem - “Isigodi SikaCatherine.” Lesi sigodlo sizungezwe yipaki elihle elinemithombo, izinyoni nezimbali.
Akukude nendlu yesigodlo iMusic Museum of Modern Art Kumu, enye yeminyuziyamu emikhulu eNyakatho naseMpumalanga Yurophu.
Population : 1,293 abayizigidi ezingu
Izilimi ezivamile : Isi-Estonia, isiRussia, isiZulu
Ukuze ungene e-Estonia izakhamizi zaseRussia zidinga i-visa .
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Estonian Online ze-Casino
2.0.1 Ukuthuthukiswa kwebhizinisi lokugembula e-Estonia
2.0.2 Imithetho yokugembula yase-Estonia
2.0.3 Ukudlala kuphi e-Estonia
3 Ukugembula e-Estonia
3.0.1 Imithetho yase-Estonia ngokugembula - isizinda esingokomlando
3.1 Amakhasino aku-inthanethi - ukuthi empeleni le mithetho isho umdlali?
3.1.0.0.2 Amakhasino asekelwe kumhlaba angaphumelelwanga
3.1.1 I-Tallinn, e-Estonia: idolobha lemibhoshongo namakhasino
3.1.2 I-casino e-Tallinn
3.1.3 Estonia ebalazweni laseYurophu
3.1.4 Tallinn ezikhangayo
3.1.5 Amaqiniso nge-Estonia
ama-bovegas awekho amakhodi wediphozithi we-2020